Antananarivo, 09 Febroary 2022 – Miditra an-tsehatra haingana ny UNICEF sy ireo mpiara-miombon’antoka aminy eto Madagasikara ho fanohanana ireo olona manodidina ny 75.000 eo ho eo izay mila fanampiana amin’ny lafiny maha-olona, taorian’ny voka-dratsin’ny rivodoza Batsirai izay namely ny faritra Atsimo Atsinanana sy afovoan-tany.
Miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin’ny governemanta, ireo masoivohon’ny Firenena Mikambana sy ireo ONG mpiara-miombon'antoka ary ny ekipan'ny UNICEF izay miasa any amin'ireo faritra voakasik'izany dia manao tombana amin'izao fotoana izao mahakasika ny halehiben'ny fahasimbana sy ny filàna tokony hokarakaraina, ary mandray an-tànana izay tena maika.
Nambaran’ny Solontenan’ny UNICEF eto Madagasikara Jean Francois Basse, izay ao anatin’ny ekipan’ny mpanao tombana, fa tena voakasik’ity rivodoza ity manokana ny asa sosialy. "Sekoly sy tobim-pitsaboana am-polony no simba na ravan’i Batsirai, izay misy akony mivantana amin’ny fiainan’ny ankizy", hoy izy. "Ho fiatrehana ity hamehana ity dia tsy maintsy mandray an-tanana ireo filàna eo no ho eo isika, ary manomana ihany koa ho amin’ny fotoana lavitr’ezaka amin'ny alàlan'ny fananganana indray tsara kokoa, ao anatin'izany ny fananganana trano matanjaka kokoa."
Anisan'ny filàna maika indrindra ny rano azo antoka sy madio ary ny fidiovana sahaza mba hisorohana ny fiparitahan'ny aretina azo avy amin'ny rano, ary koa ny fanomezana fanafody, sakafo, kojakoja fandrahoan-tsakafo ary ireo kojakoja ilaina andavan’andro ao an-tokantrano mba hivelomana. Azo atao ihany koa ny manao fanampiana ara-bola mba hanohanana ny fanorenana sy fanarenana ireo tolotra ara-tsosialy fototra, toy ny fanabeazana sy ny fiahiana ny ankizy.
Amin’izao fotoana izao dia manodidina ny 30 ny isan’ny olona namoy ny ainy vokatry ny fandalovan’i Batsirai ary maherin’ny 70.000 no nafindra toerana na tsy manan-kialofana. Mety mbola hiova ireo isa ireo satria misy toerana maro tsy afaka naleha mihitsy. Maro amin'ireo olona nafindra toerana ireo no nalefa tany amin'ny toeram-pialofana tantanin'ny governemanta talohan'ny nisian'ny rivodoza. Ny UNICEF tokoa mantsy dia nametraka mialoha ireo fanampiana tena ilaina tany amin'ireo faritra tandindomin-doza ary nisy ihany koa fiaraha-miasa akaiky tamin'ny Birao Nasionaly misahana ny fitantanana ny loza sy ny tandindon-doza.
"Ny ekipanay eny ifotony dia miara-misalahy amin'ireo mpiara-miasa eo anivon’ny governemanta mba hitondrana fanampiana ho an'ireo tena voakasik'ity krizy ity," hoy i Andriamatoa Basse. "Manoloana ny fahasimbana miantraika amin'ireo faritra midadasika toy izao dia mila manome antoka isika fa misy ny fitoviana amin'ny lafiny fiatrehana ny krizy ary tsy hisy olona voahilika."
I Madagasikara dia efa lasibatry ny hain-tany mahery vaika any atsimo sy ny vokatry ny tafiodrivotra Ana izay namely herinandro vitsivitsy izay, no mbola tratran’ny rivodoza indray. Any amin'ny firenena iray izay ahitana ny 77%-n'ny mponina ao aminy mivelona amin'ny vola latsaky 1 dolara amerikana isan'andro, ireo olana fanampiny nateraky ny rivodoza Batsirai dia manosika ny fahafahan’ny olona miatrika krizy ho any amin’ny faratampony, ary mampitombo ny tandindon-doza ho an’ireo olona marefo.
"Mbola tsy tena fantatray ny halehiben’izao krizy izao", hoy ny Solontenan’ny UNICEF, "kanefa mazava ho azy fa mila ezaka mafy ny fanarenana ny fiainana sy ny fanamboarana fotodrafitrasa".
Misahana ny serasera
Fampitaovana iatrehana loza